कोरोनासंगै आयो फेरी अर्को नयाँ रोग ‘ब्ल्याक फंगस’, जसले आँखा नै निकाल्न बा’ध्य पार्छ ! « गोर्खाली खबर डटकम
काठमाडौं। भारतमा कोरोनाबाट निको भएका सयौं बिरामीहरुमा अर्को संक्रमण देखिएपछि उनीहरुको आँखा निकाल्नु परिरहेको छ । भारतका विभिन्न ठाउँमा यो संक्रमणमा परेर आँखाको ज्यो’ति गु’माउने बिरामीको संख्या सयौं भइसकेको छ । पछिल्लो पटक सोमबार इन्दौरको एमवाइ अस्पतालमा २ जनाको आँखा नि’कालिएको छ । यी बिरामीहरु ५० र ६५ वर्षका छन् । उनीहरुको ज्या’न बचाउनको लागि डाक्टरहरुसँग आँखा नि’काल्ने बाहेक अरु विकल्प बाँकी थिएन ।
यी बिरामीहरुले कोरोनाभाइरसलाई जितिसकेका थिए । तर, कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका यी बिरामीमा नयाँ संक्रमण देखिएको थियो । यो नयाँ संक्रमणलाई चिकित्सकीय भाषामा म्यु’कर’माइ’को’सि’स र सामान्य बोलीचालीको भाषामा ब्ल्या’क फं’गस भनिन्छ । यी बिरामीहरुमा सु’गर ले’भल अत्यन्तै बढेको थियो । यही कारण उनीहरुलाई फं’गल अ’र्थात ढु’सीको सं’क्रमण भएको थियो । आश्चर्यको कुरा यी २ बिरामीलाई पहिले म’धु’मे’हको कुनै समस्या थिएन ।
भारतीय अखबार दैनिक भास्करका अनुसार इन्दौरमा देखिएका यी दुई केस नयाँ होइनन् । पछिल्लो समय कोरोना संक्रमित र कोरोना जितिसकेकाहरुमा म्यु’क’र’माइ’कोसि’सको संक्रमणका केसहरु ठूलो संख्यामा देखिएका छन् । यो दुर्लभ र प्रा’ण’घा’त’क फं’ग’ल सं’क्रमण हो । यसको समयमै उपचार गरिएन भने आँखाको ज्यो’ति जा’नुका साथै मृत्यु पनि हुन सक्छ । साइनस अर्थात नाकको भित्री तन्तुहरु हुँदै आँखासम्म पुग्ने यो संक्रमणलाई पूरै शरीरमा फैलिनबाट रोक्न डाक्टरहरुले बिरामीको अपरेशन गरेर संक्रमित आँखा वा बंगाराको मा’थिप’ट्टिको उक भाग निकाल्नु पर्छ ।
म्युकरमाइकोसिले बिरामीको साइनसका साथै आँखा, म’स्तिस्क, फोक्सो वा छालामा पनि आ’क्र’म’ण गर्न सक्छ । समय छँदै यसलाई नियन्त्रित गरिएन भने यो प्रा’ण’घा’तक हुन्छ । ब्ल्याक फंगसले धेरैजसो रोग प्रतिरोधी क्षमता कमजोर भएकाहरुलाई आ’क्र’म’ण गर्छ । बलियो प्रतिरोधी क्षमता भएकालाई सामान्यतया ब्ल्या’क फं’गस’को खतरामा रहेको मानिँदैन । कोभिड टास्क फोर्सका अनुसार कोरोना संक्रमित रहेकै क्रममा ब्ल्या’क फं’ग’सको सं’क्रमण भए बिरामीको ज्या’न जा’ने ख’तरा बढ्छ ।
विशेषज्ञका अनुसार बिरामी जति लामो समयसम्म अस्पतालमा रहन्छ र जति लामो समयसम्म स्टे’रोएड औ’षधि खा’इरहन्छ उसलाई ब्ल्या’क फं’गसको खतरा बढ्दै जान्छ । ब्ल्या’क फं’गर पहिले नै हावा र माटोमा हुन्छ । ब्ल्या’क फं’गसका हावामा भएका कण नाकबाट प्रवेश गर्छन् । त्यहाँबाट फो’क्सो र त्यसपछि र’गतको माध्यमबाट म’स्तिस्कमा पुग्छन् । नाकबाटै यसको संक्रमण साइनस हुँदै आँखासम्म पुग्छ । बिरामीको छाती वा टाउकोको एक्स रे वा सिटी ‘स्क्या’नबाट यसको सं’क्रमण पत्ता लगाउन सकिन्छ ।
यो संक्रमण अहिले भर्खरै आएको नयाँ संक्रमण भने होइन । यो मा’इक्रोमाइ’सि’ट्स नामको ढुसीका कारण हुन्छ र यो शरीरमा ती’ब्र रुपमा फैलिने संक्रमणको रुपमा चिनिन्छ । यसअघि यसलाई जा’इ’गो’माइ’को’सिस नामबाट चिनिन्थ्यो । अहिले कोभिड सं’क्रमण भएका वा निको भइसकेका बिरामीमा यो सं’क्रमण धेरै देखिन थालेको छ । यसको उपचार चाँडै नै गरिए ए’न्टि’फं’गल औ’ष’धि’बाट पनि निको हुन सक्छ र ढिलो भएमा संक्रमित अं’ग नि’काल्नको लागि श’ल्यक्रिया पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
यो संक्रमणको उपचार एन्टिफंगल औ’ष’धि’बाट हुन्छ र ढिलो भए शल्यक्रिया पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ । डाक्टरका अनुसार यो संक्रमणबाट बच्नको लागि म’धु’मेह नियन्त्रण गर्नु अत्यन्तै जरुरी हुन्छ । बिरामीलाई ‘स्टे’रो’एड’ औ’षधि’हरु कम गर्नुपर्छ र इ’म्युन मो’ड्यु’लेटि’ङ औ’ष’धि ब’न्द गर्नुपर्छ । कोभिड टा’स्क फो’र्सका अनुसार शल्यक्रियाभन्दा अगाडि शरीरमा पानीको उचित मात्र कायम गर्न ४ देखि ६ हप्ता आइभी स्ला’इन पानी चढाउनुपर्ने हुन सक्छ । यसअघि ए’न्टिफं’गल थेरापी दिनुपर्छ जसमा अ’फ्टो’टेरि’सि’न बी नामको सुइ प्रमुख हो ।
ब्ल्याक फंगसका लक्षण यस्ता हुन्छन :
–ज्वरो आउनु, टाउको दु’ख्नु, खोकी लाग्नु वा सास फेर्न गाह्रो हुनु।
–नाक बन्द हुनु, नाकमा सिंगानका साथ र’गत आउनु।
–आँखा दुख्नु, आँखा सुन्निनु, एउटा चिजलाई दुइटा देख्नु वा देख्न नसक्नु।
–अनुहारको एकपाखा मात्र दुख्नु, सुन्निनु।
–दाँत दुख्नु, दाँत ह’ल्लिनु, च’पाउँदा दुखाइ हुनु।
–वान्ता हुँदा वा खोक्दा ठूलो मात्रामा र’गत ब’ग्नु।
के गर्ने? ब्ल्या’क फं’गसका ल’क्षण देखिनासाथ तत्काल सरकारी अस्पताल वा कुनै विशेषज्ञ डाक्टरकोमा जाने। नाक, कान, घाँटी, आँखा, औ’षधि, छाती वा प्लाष्टिक सर्जरीका विशेषज्ञलाई तुरुन्त देखाउने। जसले गर्दा चाँडै उपचार सुरु गर्न सकियोस्।
यो पनि : पिसिआर रिपोर्ट पोजेटिभ आए के गर्ने ? यस्तो छ डा. रविन्द्र पाण्डेको सुझाव
यसपटकको नयाँ प्रजातिको महामारी गतसालको जस्तो सामान्य छैन । ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, शरीर दुख्ने, स्वाद र गन्ध हराउने, पखाला वा बान्ता हुने, एकदम थकान हुने, निद्रा लागिरहने, छालामा बिमिरा आउने, आँखा रातो हुनेमध्ये केहि लक्षण मिलेमा तुरुन्त पिसिआर टेस्ट गर्नुहोला । यसपटक परिवारमा एकजना संक्रमित भएमा सबै संक्रमित हुने अवस्था छ । तसर्थ कुनै लक्षण देखिएमा आइसोलेसनमा बस्नुहोला। संक्रमणको शंका लागेमा तुरुन्त पिसिआर टेस्ट गर्नुहोला । सहेर वा हेरौं भनेर अलमल नगर्नुहोला जति छिटो रोग पत्ता लाग्यो, त्यति छिटो उपचार पाउने अवस्था हुन्छ ।
पिसिआर पोजिटिभ आएमा गतसाल जस्तो सप्लिमेन्ट (भिटामिन वा इम्युन बुस्टर) खाएर ढुक्क नहुनुहोला । यसपटक छिटो कोभिड निमोनिया हुने भएकोले तुरुन्तै नजिकको कोभिड अस्पतालको फिभर क्लिनिकमा जानुहोला । त्यहाँ चिकित्सकले तपाइंलाई परीक्षण गरेर आबश्यकता अनुसार छातीको एक्स रे, रगतको जांच तथा सिटि स्क्यान गर्ने सल्लाह दिनुहुन्छ । यदि तपाइंको अवस्था खराब छ भने उहाँहरुले औषधि वा भर्नाको लागि सल्लाह दिनुहुनेछ। उहाँहरुको सल्लाह अक्षरस पालना गर्नुहोला।
लामो समय ज्वरो आयो, खोकी लाग्यो, सास फेर्न गाह्रो भयो, खाना खान गाह्रो भयो वा अक्सिजनको स्तर ९४ भन्दा तल भइरह्यो भने घरमा नबस्नुहोला । यो अवस्थामा तपाईंलाई छातीमा संक्रमण भएको बुझ्न सकिन्छ जति छिटो अस्पताल पुग्यो त्यति छिटो भर्ना हुन नपर्ने एबम सजिलोसंग निको हुने अवस्था हुन्छ।
गतसाल संक्रमण भएका वा यो साल खोप लगाएका व्यक्तिलाई संक्रमण हुनसक्छ । प्रजाति फरक भएकोले गाह्रो हुन सक्छ । मैले खोप लगाएको छु वा पोहोरको एन्टिबोडीले काम गर्छ भनेर लापरबाही नगर्नुहोला अप्ठ्यारो भए तुरुन्त अस्पताल जानुहोला।
बालबालिका तथा युवालाई केहि हुँदैन भनेर घरमा नबस्नुहोला । यसपटक बालबालिका र युवाको संक्रमण दर, गम्भीर हुने दर तथा मृत्युदर गतसालको भन्दा धेरै छ ।
अस्पताल जाने बेलासम्म घोप्टो परेर सुत्नु भयो भने अक्सिजनको स्तर केहि बढ्दछ । तसर्थ पेटको बलमा घोप्टो परेर सुत्नुहोला ।
अस्पताल प्याक छन् भनेर नआत्तिनुहोला । अस्पताल जाँदैमा सबै भर्ना हुनु पर्दैन। प्याक भएका अस्पतालले अस्पताल बाहिर समेत अक्सिजन दिएर उपचार गरिरहेका छन् ।
चिकित्सकको सल्लाह बिना आफै अक्सिजन लगाएर घरमा नबस्नुहोला । अक्सिजन उपचार हैन । निमोनिया वा अन्य छातीको संक्रमणको औषधि चलाउँदै अक्सिजन लगाउनुपर्छ । अक्सिजनको मात्रा चिकित्सकको सल्लाह अनुसार मात्र थपघट गर्नुपर्छ ।
औषधि उपचार प्रत्येक व्यक्तिको फरक हुनसक्छ । एकजनालाई निको भएको औषधिले अर्को व्यक्तिलाई निको नहुन सक्छ तसर्थ स्वास्थ्यकर्मी बाहेकका व्यक्तिले सिफारिस गरेको औषधि सेवन नगर्नुहोला । कुनै पनि औषधिले कोरोना च्वाट्ट निको हुने वा लाग्न नदिने कुरा गर्छ भने त्यो गलत हो।
प्रतिरोध क्षमता बढाउनको लागि जथाभावी आयुर्बेद औषधि नखानुहोला । सम्बन्धित चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सिफारस अनुसार मात्र आयुर्बेद औषधि सेवन गर्नुहोला आयुर्बेद औषधिले कोभिड निको हुँदैन तपाइंको स्टामिना बढाउँछ यस्तो बेला सबै चिकित्सा पद्दतिको एकीकृत उपचार प्रभावकारी हुन्छ ।
यसपटकको संक्रमणले निकै छिटो फोक्सोमा असर गर्ने किसिमको छ । ४ ६ घण्टामा निकै बढी असर गर्न सक्छ । तसर्थ भोलि अस्पताल जाउँला भनेर नबस्नुहोला । निको भएका संक्रमितका कुरा सुन्नुहोला ।
कुनैपनि चिकित्सकले औषधि चलाएको बेला पनि भित्रभित्रै असर हुनसक्छ ्र यो भाइरल संक्रमण भएको हुँदा एन्टिबायोटिकको भर पर्नु हुँदैन यस्तो अवस्थामा एकपटक छातीको एक्स रे वा सिटि स्क्यान गर्नु सुरक्षित हुन्छ ।
अस्पतालमा गम्भीर बिरामीप्रति चिकित्सकको ध्यान बढी हुन्छ । तसर्थ नआत्तिनुहोला।
उपचार पश्चात पिसिआर नेगेटिभ आएपनि कोभिडले तपाइंका विभिन्न अंगमा असर गरेको हुनसक्छ । चिकित्सकको सल्लाह अनुसार यसको पनि उपचार गरेर स्वास्थ्यलाभ गर्नुपर्ने हुन्छ । डा. रबिन्द्र पाण्डे जनस्वास्थ्यविद हुन् ।